Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo tegay Maxaas – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo tegay Maxaas
Mareeg.com: Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Bare ayaa maanta booqasho aan horay loo sii shaacin ku tagay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Guddoomiyaha maamulka degmada Maxaas ee dowladda Soomaaliya, Mu’min Maxamed Xalane ayaa warbaahinta u xaqiijiyay booqashada wasiirka iyo wafdiga la socda.
Mu’min Maxamed Xalane ayaa ujeeddada socdaalka wasiirka ku sheegay in ay tahay u kuurgelidda xaaladda nololeed iyo tan nabadgelyo ee degmada.Guddoomiyaha ayaa tilmaamay in xaalad nolol-xumo ay ka jirto deegaanno hoos-taga degmada, taas oo saameysay dadka iyo duunyada.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre iyo wafdiga uu hogaaminayo ee maanta booqasho ku tegay Maxaas ayaa halkaasi kula kulmay odoyaasha dhaqan iyo maamulka Degmada, kaasi oo looga hadlay arrimo xagga nolosha iyo amniga ah.
Cabdullaahi Goodax Barre oo ay wehliyaan saraakiil ka tirsan hay’adaha Qaramada Midoobay u qaabilsan dhanka samafalka ayaa u jeeddada socdaalka ay ku tegeen degmada Maxaas ay tahay sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda nololeed iyo tan amni ee ka jirta halkaasi, iyadoo kulanka uu la qaatay qeybaha bulshada iyo maamulka looga arrinsaday sida
Kulanka dhexmaray wafdiga wasiirka iyo waxgaradka Maxaas ayaa la isku afgartay in bulshada degmadaasi ku dhaqan la gaarsiiyo kaalmo dhinac waliba leh.
Degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaa gacanta ku haya ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ka socda Itroobiya.Mareeg Media
Wasiirka maaliyadda oo ka warbixiyey horusocodka Guddiga Maamulka Maaliyadeed (FGC)
Somaliland oo gaari rayid ka qabsatay xildhibaan Cali Khaliif Galeyr